QAPHELA: Igobolondo imfoloko yesitayela se-Gnome | Kusuka kuLinux
BE: Igobolondo imfoloko yesitayela se-Gnome
mthokozisi | | I-GNU / Linux
Unjani. Kulungile lapha futhi kepha manje ngokuhlaziywa okuncane kokubona kunolwazi.
Emasontweni ambalwa edlule ngishilo eposini mayelana nekusasa le- I-GNOME Shell nokuthi kwakuyini i- shell. Yebo, ngithatha uhambo ngeDevianart ngihlangana noDevianite I-CraazyT futhi ngiyakuthola lokho BE: Igobolondo (Imfoloko yePlasma ngesitayela esimsulwa seCinnamon kusuka eGnome Shell) neqiniso ngimangalisiwe ngamandla wokwenza ngokwezifiso le foloko.
Ngokusho kukaCraazyt, ukusebenza kwale foloko kungcono kakhulu kune-plasma futhi kungcono kakhulu, ngaphandle kokususa imiphumela. Empeleni angikaze ngiyivivinye, kepha uma ngikhuluma iqiniso ngilingwa kakhulu ukuthi ngikwenze futhi ngibone ukusebenza, isimilo neminye imininingwane.
I-Cinnamon kube yimpumelelo kubasebenzisi be I-Gnome nokuthi bafuna ukuba nesitayela 2 ochungechungeni, ngakho-ke ngibona ukuthi i-BE izolingana nayo ku KDE. Noma KDE kuyimvelo engaceli lutho kumuntu, kusobala ukuthi inokuthile okwenza abasebenzisi abaningi bangakhululeki futhi leso "isisindo" sayo (isebenzisa izinsiza eziningi kakhulu) futhi lokhu kungenye kubonakala sengathi kunamandla onke we KDE endaweni elula futhi eyenziwe ngokwezifiso kakhulu.
Yize kimi uqobo KDE akukho kimi gusta (ukuthanda kuphela) Ngalemfoloko sengivele ngiyengwe ukuyifaka kabusha futhi ngiyibone isebenza.
Angazi noma kwenzeka ngengozi noma nje ukuqondana kwezinto, kodwa uhlobo I-Cinnamon (BE: Igobolondo) le- KDE Kungitshela ukuthi amaqembu omsebenzi walezi zimfoloko afuna okuthile okuhlukile, okwenziwe ngezifiso, okujabulisa iso, okusebenzisa amandla aphelele wedeskithophu futhi okubaluleke kunakho konke, ukusetshenziswa kwezinsizakusebenza okulinganiselayo okuvumela ukubukeka nokuzizwa okuphezulu ngaphandle kokujezisa kakhulu kuya ekusebenzeni.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » BE: Igobolondo imfoloko yesitayela se-Gnome
U-Edgar J. Portillo kusho
Iqiniso ukuthi langilinga, kepha ngizoqhubeka nokusebenzisa iPlasma yami ngoba ikhompyutha yami iyayisekela kahle ... Noma kunjalo, kubukeka njengenye indlela enhle kakhulu ... Waoo ... ngizozama ngenxa yelukuluku !
Phendula u-Edgar J. Portillo
By the way (¬_¬)… Ingatholakalaphi?
https://blog.desdelinux.net/instalacion-y-configuracion-de-beshell/ <—— Hehe nayi ifomu, ngiyaxolisa ngamazwana amaningi (ngikhuluma ngedwa) ...
Hmm, ngifisa kanzima kusuka ku-KDE SC, lezi "zinto ezimangazayo" azingikholisi! (ngezwi le-curmudgeon endala).
Cishe sesiku-2013: uma umenzi wekhofi okufanele angisebenzise angabambi i-KDE SC ngifaka i-suite ephelele kepha esikhundleni sokusebenzisa iPlasma ngisebenzisa i-AwesomeWM nekhambi elingcwele 😀
Sengivele ngikhuluma nge-BE: Shell kwisizini edlule, yibheke at:
Yebo, kepha uma engakhulumi ngayo, angazi ukuthi ukhona 😀! Noma kunjalo, kungumnikelo omuhle futhi izixhumanisi zakho ziyakuxhasa!
kahle ... ngizoqhubeka nokuthembeka ku-kde ngoba angiwuthandi umqondo wokusebenzisa igobolondo kakhulu ... ngethemba ukuthi i-kde ayiwuthathi ngokungathí sina lo mkhuba omusha ...
Yebo, kubonakala kimi ukuthi kuzofanele uyeke ukusebenzisa i-KDE, ngoba iPlasma iyiShell xD
Yebo, iqiniso lihle kakhulu, futhi angicabangi ukuthi kuyimfashini, kunalokho yilokho ozokuthola kuwo wonke amadivayisi emakethe
Ngiyazi ukuthi u-Elav unikeze amanothi ngalemfoloko kanye neqiniso lapho ngibabona beheha ukunaka kwami ​​kanye nelukuluku lami lokubona ukuthuthuka kwayo kungabi nomthelela wayo. Ngiyazi ukuthi iPlasma yiyona ehamba phambili ye-KDE futhi iqiniso, njengoba ngishilo, alibuzi lutho kunoma ngubani futhi ngemininingwane nangezici zokwenza ngokwezifiso akufani. Manje kufanele ukhumbule ukuthi izindawo zedeskithophu noma abaphathi bamawindi yi-SHELL (i-plasma, i-gnome, njll.) Esivumela ukuthi sisebenzise izinsizakusebenza nezici zamaqembu ethu.
Nge-tammuz ngabelana ngemibono yakho ngoba lokhu akuyona imfashini kangako kodwa ukuthambekela, ngoba ukusetshenziswa okukhulu kwamadivayisi afana ne-Tablet kanye ne-SmartPhones kwenza kube nesidingo sokuba nokuthile "ngokufanayo" (njengoba kwenza i-Apple). Kuyafaneleka futhi ukusho ukuthi kukhona okwehlukile kwe-Android ye-PC (kusengukuthuthuka nokulungisa izigaba) nokuletha indawo ephathekayo kwi-PC (ephathekayo noma elungisiwe) kukhombisa ukuthi izinto ziya kuleli phuzu.
Angiyena umuntu omkhulu wezamakhompiyutha nokuxhumana, kepha uma kusobala, ngezinga elithile, ukuthi lo "mkhuba" unemvelaphi yawo, uyini? Angazi ngempela. Angikholwa ngokuqondana kwezinto, kepha kuyabukeka ukuthi ukubukeka kwe-BE kufana kakhulu neShell ye-GNOME nokuba nomcabango omubi kancane; Ingabe lo ngumbono wokuheha abasebenzisi be-GNOME ku-KDE?, Ngithi ngoba abaningi badela abafileyo noma besendleleni eya ekufeni kuya kuphrojekthi ye-GNOME. Noma kunjalo, ukuqagela nje kepha sizobona ukuthi kwenzekani.
Ngenkathi ngifunde okuthunyelwe kwakamuva kwe-BE :: Shell (kufaka phakathi lokhu), ngicabanga ukuthi le phrojekthi ayiqondakali kahle. Le Shell ayihlangene nakancane nabathuthukisi be-KDE futhi ayinayo i-hit ephawuleka kakhulu. Ngingasho ukuthi ubukhona bayo buyi-anecdotal okwamanje, futhi ukusetshenziswa kwayo kukhawulelwe kubasebenzisi abathile abathanda ukufaka izandla kumafayili wokumisa.
Le Shell imane isebenzise imitapo yolwazi ethile ye-KDE futhi ayilethi izinto ezifana ne-Akonadi, Nepomuk ne-co, eyenza kube lula kakhulu, kepha engazinzile futhi "ingakafiki isikhathi"; Akuhlangene ngalutho nephrojekthi "esemthethweni" futhi ngeke iwuthathe ngokuphelele. Okungcono kakhulu, kuzoba ngenye indlela yesitayela seRazor-Qt, ngokuhamba kwesikhathi futhi kuphela uma ichuma.
Umbhali wayo, ofanayo nowenjini ye-Bespin, waklama uhlelo okufanele lumiswe ngesandla kusuka ekuqaleni, ngemuva kokufakwa okudinga ukuhlanganiswa kwangaphambilini. Uma sibheka iDeantantart kancane, sizobona ukuthi kukhona "itimu" enwetshiwe, okuyiyo ekuzithombe-skrini zalesi sihloko (nokuthi ngazisebenzisa kafushane ngokwami), kepha ngomqondo oqinile wegama, ngamunye umsebenzisi angakwazi ukuyilungiselela ngokuthanda kwabo okuphelele bese eyibumba ibe sezingeni eliphakeme. Kepha, ngiyaphikelela, kudinga ulwazi iningi elingenalo futhi elikulahlayo emehlweni enophyte.
Ngamafuphi, liyigobolondo elihle kakhulu elinamandla, kepha kungenye indlela engahlose ukuncintisana ne-KDE, kuphela ukunikela ngemvelo ye-Qt elungiseka ngokuphelele.
Ngivumelana nawe futhi kusesekuseni kakhulu ukuthi ungakhuluma ngalokhu njengoba ngiphawula, kepha futhi ngiyakhumbula ukuthi i-LXDE inomncintiswano wayo eRazorQT.
Ngiphinde ngihlanganyele nawe umbono wokunikela ngemvelo ye-QT elungiseka kahle, ngokumangazayo "into efanayo" (angisho ukuthi kungani iCinnamon ikhona) kuCinnamon futhi nangaphezulu, njalo lapho ngibona BE kungikhumbuza ubumnandi obuningi futhi ngisho naku-openbox noma ukukhanyiselwa (kunjalo ngezesekeli ezidingekayo). I-KDE ingeyami ye-2 engcono kakhulu ye-DE ekhona nokuthi ngombono wayo ayinakulingana. Ukuphela kwento engingalokotha ukuyisho (ngaphandle kokucasula noma ngubani) ukuthi njengeMicrosoft icela izinsizakusebenza ezengeziwe zokuyisebenzisa ngokugcwele (ngigcizelela ukuthi ukuqhathanisa kuphela, ngiyazi ukuthi awukwazi ukuqhathanisa okuthile kwekhwalithi ngento engenayo).
Bengifuna nje ukugqamisa umbono ongizungezile ukuze ngibheke izitayela nokuziphatha uma kukhulunywa ngokuhlala emakethe yemakethe, ngoba yonke imboni yesoftware idinga imali noma imali ukuze iphile futhi inikeze izindaba. I-KDE empeleni inelayisense ye-QT yokuphathelene futhi angingabazi ukuthi i-GTK inenani elilinganayo, kepha uma inelukuluku futhi angicabangi ukuthi kwenzeka ngengozi ukuthi le ntuthuko yenzelwe ukuthokozela nokuba yize ingancintisani ngokusobala, kuqinisekile ukuthi okwamanje bazothanda (njengeCinnamon noma iMate vs Gnome Shell)
Kubukeka kukuhle kakhulu.
Kepha angicabangi ukuthi izoyishaya i-KDE 😀
Na, kepha uma ilula njengesinamoni, kungaba ukucabanga.
Kanjani nge kik1n.
Iqiniso liyalungiseka ngendlela emangalisayo futhi lingabekwa ngezindlela eziyinkulungwane (ngokwesibonelo ukwenza kube ngokwakho (http://www.rafaelrojas.net/2012/09/01/archlinux-kde-en-la-netbook/) futhi ungathola indawo emnandi ngokwedlulele, elula ngokuqhathaniswa nokunambitheka komsebenzisi wayo. Ngicabanga (futhi lokhu kungumqondo womuntu siqu) ukuthi ukuvumela enye indlela engalungiswa nge-CSS standard futhi mhlawumbe ngaleso sikhathi nge-HTML5 nezinye izinto, kuzodala izinketho eziningi ezinikezwe ukwenza ngokwezifiso nokulungisa kahle ukuguqula lezi ezinye izindlela . I-GNOME isivele iyisebenzisa futhi cishe (uma kungewona wonke) i-webOS iyanamathela kuyo.
Yize i-BE ingahlangene nakancane ne-KDE, kusobala ukuthi ufuna enye indlela elula yokukufeza, isitayela seCinnamon kakhulu; ngoba ukungagwegwesi kufanele wazi i-labyrinth yezinye izindlela ezinikezwa yi-KDE futhi kungenzeka ukuthi inikeze ngaphezu kwe-1 "isiyezi" sayo.
Masethembe ukuthi le phrojekthi izothela izithelo, ngicabanga ukuthi izokwenzeka futhi izovela esikhundleni se-GNOME neCinnamon futhi ingahle ibe imbangi yangempela yePlasma nokuthi, uma kuzocatshangwa.
Lo mbhalo uthi Be :: Shell imfoloko futhi lokho akulona iqiniso. Kungenye indlela, hhayi imfoloko yePlasma.
ICinnamon neMate ezinye izindlela zeGnome Shell futhi bazibiza ngemfoloko. Singasho futhi ukuthi iRazorQT imfoloko ye-LXDE ngoba iyindawo esekwe ku-QT isebenzisa i-OpenBox (efanayo ne-LXDE).
Ngicabanga ukuthi yindaba yama-semantics kakhulu kune-thematic, kuyiqiniso futhi ngasikhathi sinye akunjalo, konke kuncike ekusebenziseni kwakho okunikeza amagama namazwi asetshenzisiwe. Ngabelana ngombono wakho ngokwengxenye ngoba "kungenye indlela" yePlasma ngoba inikela ngenye indlela yokwenza ngokwezifiso nokuhlela kahle i-KDE (ngiyagcizelela, iplasma iyamangalisa futhi ayinakulingana futhi qaphela okushiwo umsebenzisi we-GNOME) ngasikhathi sinye iyimfoloko ngoba ixhaphaza inhliziyo ye-KDE esiphezulu ngaphandle kokusebenzisa i-Shell ezenzakalelayo ye-KDE (Plasma) efana neCinnamon, Mate ne-Unity ngeGNOME 3.
Sawubona Jorge. Amazwana abhekise eqinisweni lokuthi imfoloko inencazelo eqinile ekhompyutheni:
ICinnamon imfoloko yeGNOME Shell neMate imfoloko yeGNOME 2. Be :: I-Shell akuyona imfoloko yePlasma (ayisebenzisi ikhodi yomthombo wePlasma). Ngiyethemba isixhumanisi seWikipedia sicacisa engikushoyo.
Ngivumelana nawe ngokuphelele, yingakho ngibhekise kumatemu nasetshenzisweni ongayinikwa, kube ngcono noma kube kubi.
Ngiyaphinda ngiyasho ukuthi isitatimende sakho silungile impela, kepha bengiphenya kancane futhi ngibona okungaphezulu kwekhodi yomthombo, amaqhinga asho ukuthi i-BE kanye nokusetshenziswa kwayo kokucushwa maqondana ne-KDE ukuze ikwazi ukusebenzisa i-BE. Angikwazi ukuphetha noma yini okwamanje kepha kuze kube manje ngingasho: I-Windóusico 1 i-napkin yakho 0 (hehehe).
Ngiyabonga ngokuthatha isikhathi sakho ucacise iphuzu futhi ngikuthumelela konke okuhle.
Oo wouuuu uma lokhu okunethezeka 😀
Kuhle kakhulu ezithombeni nakwabanye…. kepha okwamanje iqiniso, empeleni liyesabeka. Okungenani yindlela engabona ngayo lapho ngiyizama cishe emavikini e-3-4 edlule. Kuzoba ukuthi sengikujwayele kakhulu kde vele 😛
Yebo, uma wehla eLamborghini Aventador bese ungena esitimeleni esiya eConstitución Station (Bs.As., Argentina) kunomehluko ... emangalisayo 😛
Kutholakalela ukulanda iFirefox 16: Kugxilwe konjiniyela
Ungayisebenzisa kanjani iSkype ngozwela